“ဆိုရေးရှိပြီဟု ထင်မြင်သည်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ဆိုရေးရှိပြီဟု ထင်မြင်သည်”
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Dec 8, 2012 in Creative Writing, Myanma News | 8 comments
ဂဇက် ရွာသူ/ရွာသားများ ခင်ဗျာ
အောက်ဖော်ပြပါ ပို့စ်ဟာ ကျွန်တော် ဦးကျောက်ခဲရဲ့ အားထုတ်မှူ မဟုတ်ရပါခင်ဗျား။
မူလရေးသားသူမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်မြို့က ဆရာဦးမင်းဒင် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ယခုအချိန်မှာ အားလုံးဘဲ စဉ်းစားကြသင့်စေလိုတာ ကြောင့်ပါခင်ဗျား။
( ခွင့်ပြုပေးသော ဆရာဦးမင်းဒင်ကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ခင်ဗျား)
Credit to http://www.mindin.info/2012/12/blog-post.html
တိုင်းရေးပြည်ရေးဟာ ကိုယ်ထင်တာမြင်တာနဲ့ အများကြီး ကွဲလွဲနေတတ်တာမို့ ကြက်ဥ အရောင် တိမ်တောင်သဖွယ် မင်းရေးကျယ်၊ ပြည်ထဲအရေး ပေါက်နဲ့ကျေးလို့ဆိုကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က သတင်းတွေ ဖတ်ပြီး နားစွင့်တဲ့အဆင့်သာရှိတာမို့ ကျနော်ဟာ နိုင်ငံရေးခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး စာရေးခဲ ပါတယ်၊ နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေလေ့ရှိပါတယ်။ ငြိမ်နေရတဲ့ အကြောင်းက ကျနော်ဟာ နိုင်ငံရေးကျမ်းတတ်မဟုတ်တဲ့အပြင် အရေးအရာလေ့လာသူ၊ ဟိုအရေး ဒီအရေး ကျွမ်းကျင်သူ မဟုတ်တဲ့ အတွက်ပါပဲ။ ကိုယ့်ဘဝနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်း နောက်ကြောင်း မရှင်း တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ်တိုင်ဘာတစ်ခုမှ ထိထိရောက်ရောက် ဝင်မလုပ်နိုင်ပဲ လူမှုကွန်ယက်တွေ ကနေ အာချောင်ရုံသက်သက် အလုပ်ကို ကျနော်မုန်းပါတယ်။ အခုကော ဘာဖြစ်လို့ ရေးရသတုန်း မေးလို့ တိုတိုဖြေရရင် မပြောမဖြစ်ဘူးလို့ ခံစားမိလို့ပါ ။ရေးတာကို ဖတ်ပြီးယုံကြည်လက်ခံကြရန် မဟုတ်ပဲ ဝေဖန်ဆင်ခြင်ပြီး ဝိုင်းဝန်နည်းလမ်းရှာကြံဖို့သာ ရည်သန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
၁။ ညီအကိုမသိတသိ အချိန်
မြန်မာပြည်ကြီး ပြောင်းလဲနေပြီလို့ ဆိုကြပါတယ်။မှန်ရာကို ဝန်ခံရရင် ယုံကြည်လက်ခံနိုင်စရာ အချက်တချို့သာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သော်ငြား တိုင်းပြည်နာလွန်းနေတဲ့ အခြေအနေမို့ ပြောင်းခဲ့ပြီ ဆိုတာကို ကောင်းတဲ့ဖက်က တွေးပြီး ကျိတ်ဝမ်းသာနေခဲ့သူပါ။
အစိုးရကော အတိုက်အခံပါ ကမ္ဘာပေါ်လျှောက်ပါလို့ နှံ့သလောက်လည်နိုင်ပြီး ထိတွေ့ဆက်ဆံကြ နေတာ၊ မီဒီယာတွေ ပွင့်လင်းလာတာ၊ တံခါးတွေပိုပွင့်လာပြီး ဧည့်သည်တွေ စုံပြုံဝင်ရောက် လာကြတာတွေဟာ၊ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မို့ ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ် ကျနော့် ယုံကြည်ချက်က ပိုတိုး လာပါတယ်။ ဒီမှာတင် လယ်သမားအရေး၊ အလုပ်သမားအရေး၊ ရခိုင်အရေး၊ ဦးပိုင်အရေးတွေ ဆက်တိုက်ပေါ်လာ ပြန်တော့ ဒါဟာအပြောင်းအလဲရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သာမန်ဖြစ်ရပ်လို့သာ မှတ်ယူ လက်ခံထားခဲ့ ပါတယ်။
၂။ လက်ပံတောင်းတောင်အရေးမှ အနိဌာရုံများ
ဒါပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်မှာ လောင်မီးဗုံးတွေ ဒဏ်ကြောင့် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်ရတဲ့ ရဟန်းရှင်လူ တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ သတင်းတွေကို မြင်ရဖတ်ရတဲ့အခါ ကျနော်ဟာ အိပ်မက်ကနေ လန့်နိုးလာသလို ခံစား လာရပါတော့တယ်။ ဘာကြောင့်များ ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီး ထဖြစ်လာရသလဲ။ တကယ်ပဲ နောက်ကြောင်းကို ပြန်လှည့်နေပြီလား ဆိုတဲ့အတွေးတွေ ဝင်လာပါတော့တယ်။
ဒီမှာတင် လူမှုစာမျက်နှာတွေမှာကော ရှိရှိသမျှ သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာပါ လက်ပံတောင်းတောင် အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါသစိတ်အခြေခံနဲ့ မဲမဲမြင်ရာ အပြစ်ဖို့တဲ့ ပေါက်ကွဲသံစဉ်မျိုးစုံ မြင်လာကြား လာရတော့တာပါပဲ။ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းမှုတွေအပြင် သမ္မတထွက်ပေးဖို့၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီထက် ပြတ်သားဖို့ အသံတွေကြားလာရပါတော့တယ်။
FreedomNewsGroup(Burma) ဆိုတဲ့ သတင်းစာမျက်နှာတစ်ခုကဆို ဒီကိစ္စမှာ ဦးသိန်းစိန် တရားခံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မျိုးနဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးယု လွင်ရဲ့ “နေပြည်တော်ကတိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားပါတယ်”စကားကို အကျအနကောက်ပြီး မိမိလိုရာ ဇွတ်ကောက်ချက်ဆွဲတာမျိုးတွေအထိ တွေ့လာရပါတယ်။
သူတို့ဘာကို ၊ဘယ်သူ့ကို မျှော်လင့်နေကြပါသလဲ။ မြန်မာပြည်မှာ ဒိုင်းဝန်ထက်ကဲတဲ့ မောင်ပုလဲတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါပြီ။ ရေရာတိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခု မတွေ့ခင် ကြွက်ချေးတွေထဲက ဆန်ကို ခါထုတ် မပစ်မိဖို့တော့ သတိကြီးကြရပါလိမ့်မယ်။
၃။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ တရားခံဖြစ်နိုင်သလား။
ကျနော့်ကိုယ်ပိုင်အယူအဆအရ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ ကိုယ်တွေ့အရ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်တုန်းက မြန်မာပြည်ဖွား ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ယောက် ချင်းရိုင်ဖက် နယ်စပ်မလွယ်ပေါက်ကနေ နယ်စပ်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူနေတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီး လောင်စာဆီခိုးသွင်းဖို့ စီစဉ်တဲ့ အလုပ်မှာ ကျနော် ကိုယ်တိုင် လေ့လာသူအနေနဲ့ ပါသွားဖူးပါတယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းအတွက် အဓိကချည်းကပ်ရမဲ့သူဟာ အဲဒီတုန်းက ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဦးသိန်းစိန်ပါပဲ။ဒီမှာတင် ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးက ရုတ်တရက်ဆိုသလို စိတ်ပျက်လက်ပျက်လေသံနဲ့ အဲဒီဗိုလ်ချုပ်နဲ့ဆိုရင်တော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး၊ သူကတကယ့် လူကောင်း၊ အစိုးရခေါင်းဆောင်လုပ်သင့်တဲ့ လူမဟုတ်ဘူး၊ ဂေါပကလုပ်ရမဲ့သူလို့ မှတ်ချက်ပြု ပါတယ်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသူ သူ့ဇနီးဟာ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အနီးကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသူပါ..တဲ့။ ကျနော့်နားနဲ့ ဆတ်ဆတ်ကြားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ပါ။
မြေးကို သာမန်ဆေးရုံမှာပြတာ၊ ရိုးရိုးကုပ်ကုပ်နေထိုင်တာ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းကို အဆောင်အ ယောင်မပါပဲ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းတာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကင်းတာ သူ့စကားပြောပုံ၊လုပ်ပုံကိုင်ပုံ အများစုဟာ စေတနာပါကြောင်းပေါ်လွင်တာကြောင့် ဒီအခြေအနေမှာ စွပ်စွဲခံရသူစာရင်းကနေ ဖျက်ထားမှသာ ရန်သူအစစ်၊ တရားခံအစစ်ကို ခြေရာခံနိုင်မှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ဦးသိန်းစိန် ဘာကြောင့် သမ္မတဖြစ်လာသလဲဆိုတာ ကျနော်ဆင်ခြင်မိတဲ့ အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီဆင်ခြင်ချက်ဟာ မြန်မာပြည်ကို လမ်းကြောင်းသစ်ပေါ် ဘာကြောင့်ကူးပြောင်းရသလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ ဆက်စပ်နေ ပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းကို ကျနော်တစ်ယောက်တည်း ကျိတ်ပြီး အဖြေရှာခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ကျနော့်အယူအဆကို တိုတိုဖြေရရင် ဘယ်လိုမှ မလူးသာမလွန့်သာ အခြေအနေကြောင့်ပါ။ ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့ ဂရုဏာတရား၊ ဆင်ခြင်တုံတရား၊ စေတနာတရား၊ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ဆက်တိုးစရာ ခြေတလှမ်းစာတောင် မကျန်တော့တဲ့ အခြေအနေမို့ပါ။ ဆက်တိုးမယ်ဆိုရင်လဲ အာရပ်နွေဦးနဲ့ညားမဲ့အပြင် ရေမြောင်းထဲက နေ ထွက်ပြီး ရွှေသေနတ်လေးနဲ့ အသက်ကိုလဲဖို့တောင် မအောင်မြင်တဲ့ အခြေမျိုး ၊ မင်းတရားကြီး ကိန်းသေပေါက် ဆိုက်တော့မှာမို့ပါ။
တိုင်းပြည်မှာတင်နေတဲ့ကြွေးမြီးတွေ၊ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းအောင် ထုတ်ရောင်းထားတဲ့ သယံဇာတတွေ၊ ခြေလွန်လက်လွန်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်တွေကြောင့် ၂၀၁၀ လွှတ်တော်ဟာ ဘာတစ်ခုမှ လုပ်စရာ မရှိပဲ ပြဿနာမျိုးစုံ ထိုင်ရှင်းနေရာက မကြာမီ နိဋ္ဌိတံရမှာမို့ အမေရိကန်ဘက်ကို ခြေဦးလှည့် လက်ယပ် ခေါ်ခဲ့တာပါပဲ။
တကယ်တော့ ဒီအစီအမံတွေဟာ ၂၀၁၀ လွှတ်တော်မတိုင်မီ စီမံကြံစည်ခဲ့တဲ့ အရာတွေပါ။လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ခန့်ကတည်းက စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအချို့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေရာပေးပြီးအမေရိကန်ကို ချည်းကပ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းရှာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော့်ဆီမှာတောင် ဓာတ်ပုံနဲ့ စာရွက်စာတမ်းတချို့ လက်ခံရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီစီမံချက်ဟာ အတိုက်အခံ အတော်များများရဲ့ လက်ထဲကိုရောက်ခဲ့ ပါတယ်။ စီမံချက်ရေးဆွဲပုံကတော့ စစ်တပ်ထဲမှာ မင်းတရားကြီးကို မနှစ်မြို့သူတွေ တရုတ်ကို အလွန်အကျွံ အားထားတာကို မကျေနပ်တဲ့ ထိပ်တန်းစစ်ဖက်အရာရှိကြီးတွေ ရှိနေပြီဆိုပြီး ပုံဖျက်ထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါ။တချိန်တည်းမှာပဲ ၂၀၀၈ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေမှာ နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာ မသက်ရောက်နိုင်ဖို့ ၊ ကျူးလွန်ခဲ့သမျှအမှားတွေကို လက်စဖျောက်နိုင်ဖို့ တရားမဝင်ကြိုတင်မဲ တွေနဲ့ စံနစ်တကျ အာဏာကို လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာပါ။
ဒီနောက်ခံအကြောင်းတွေကြောင့် လွှတ်တော်ပေါ်လာတဲ့အခါ အမေရိကန်ကို သေချာပေါက်ချည်း ကပ်နိုင်ဖို့ လူရွေးရာကနေ လူမှန်လို့အများယူဆကြတဲ့ ဦးသိန်းစိန်ဟာ သမ္မတဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ ဒီအခြေအနေကို သမ္မတကြီးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ခဲ့ဟန်ရှိပါ တယ်။ ဒါကြောင့် “ကျွန်မသမ္မတကြီးကို ယုံတယ်”ဆိုတဲ့ စကားသံထွက်လာတယ်လို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အတိုချုပ်ရရင် သမ္မတကြီးဟာ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရင် ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူး သလို ဖြစ်မဲ့အခြေအနေကြောင့် နောက်ကြောင်းလှည့်မဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သူဟာ နိုင်ငံရဲ့ရှေ့ကြောင်း နောက်ကြောင်း၊ အကြောင်းအားလုံး အေးနိုင်အောင် အမေရိကန်ကို မလွတ်တမ်းချည်းကပ်နိုင်ဖို့ လုံးပန်းမဲ့သူပါ။ထို့အတူ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းဟာလည်း ဒီနည်းဗျူဟာမှာ အခရာနေရာက ပါဝင်နေသူ မို့ ထွက်ခိုင်းရမဲ့သူ စာရင်းမှာမပါသင့်ပါ။
ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ပြီလို့ ကြေညာရင်း အမေရိကန်ကို နာသားပါရ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ အမေရိကန်ကလည်း အာရှပစိဖိတ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ မဟာဗျူဟာ စီမံချက် ကြောင့် အိနြေ္ဒမဆည်နိုင်ပဲ အချိန်တိုတိုအတွင်း ဝင်လာပါတော့တယ်။ အမေရိကန်ဟာ လူဝတ်လဲ အစိုးရရဲ့ မှားနေဆဲ နောက်ပြန်လှည့်နေသော ခြေလှမ်းတချို့၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ ရှိနေသေးတာကို သိလျက်နဲ့ ပွင့်လင်းလာတဲ့ မီဒီယာနဲ့ နိုးထလာတဲ့ လူထုရဲ့ အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ ကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပြီး အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ခြေလှမ်းကျဲကျဲနဲ့ လှမ်းလာရာက အိုဘားမားကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ တရုတ်ဟာ မြန်မာပြည်ကို ကျားပိန်တွယ် ဆက်တွယ်နိုင်ဖို့ အတွက် ထင်ရာစိုင်းအကျင့်ကို မဖျောက်နိုင်ကြတဲ့ စစ်ဗိုလ်အုပ်စုကို အနုနည်းရော အကြပ်ကိုင်တဲ့နည်းနဲ့ပါ စေလိုရာစေနိုင်ဖို့ စီမံလာပါတော့တယ်။ လက်ရှိ တရုတ်ရဲ့ လက်ကတုံးတောင်ဝှေးကတော့ ဦးပိုင်ပါပဲ။ ဦးပိုင်ဟာ စစ်သားတွေအကျိုးအတွက်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို ထင်တိုင်းကြဲနေတဲ့ မာဖီးယားဂိုဏ်းအကြီးစားဆိုတာ လူတကာသိပြီးသား ကိစ္စပါ။သေချာတဲ့အချက်က အမေရိကန်ဟာ ဒီအဆင့်အထိ ခြေလှမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးကာမှ “ဟုတ်ကဲ့ ဒီလို အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေရင်လဲ ကျနော် ပြန်လိုက်ပါအုံးမယ်”ဆိုပြီး သိက္ခာမဲ့စွာ ထ ပြန်မဲ့ နိုင်ငံမျိုး မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဧရာမနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုရဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် ပြိုင်ဆိုင်မှုကြားမှာ မြန်မာပြည်ဟာ အဓိက နေရာက ပါနေတဲ့အချက်ပါ။
၆။ ကျုပ်တို့အမျိုးက တောကြောင် သိပ်ပေါတယ်။
အဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာမျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့သူတွေစာရင်းမှာ ပြည်ပအတိုက်အခံဘဝကနေ ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံနဲ့ ပြန်ဝင်လာကြတဲ့ နာမည်ကျော် ဥာဏ်ကြီးရှင်တွေဟာ ထိပ်တန်းက ပါနေပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ် အများစုဟာ မြန်မာပြည်ကြီး ကြီးပွားစည်ပင်စေကြောင်းထက် အငြိမ့်စား၊အခန့်သား အနေအထားနဲ့ ပြည်ပမှာ အစဉ်အဆက်နေလာခဲ့သူတွေပါ။ နေရာရဖို့ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဖို့ သိက္ခာကို ပဲလှော်နဲ့လဲခဲ့ကြတဲ့သူတွေများ ပါတယ်။ သမ္မတအကြံပေးထဲ အထိ ရောက်နေတဲ့သူတွေ ကို မြန်မာ့ခရိုနီတွေက ကြိုက်ဈေးပေးပြီး ဝယ်လိုက် ကြပြီလားဆိုတာ စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ မဲဆောက်လို နယ်စပ်မှာတောင် အခုလို စပ်ကူးမတ်ကူးကာလမှာ တရုတ် ဒလန်အဖြစ် လုပ်စားနေတဲ့သူတွေပေါ်လာနေပါပြီ။
လက်ပံတောင်းတောင် ပြဿနာမှာ ဖဲသမားစကားနဲ့ ပြောရရင် နှစ်ပယ်ရှင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေ ပါနေနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အစိုးရရောလူထုပါ အကြပ်ရိုက်ပြီး တရုတ်ဖက်ကို ခြေကန်ရုန်းမဲ့ဆရာတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အရပ်သတင်းအရ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကို အကြံပေး ပုရောဟိတ် ဇော်ဦးက “တရုတ်ကိုလဲ ကြောက်ရတယ်လို့ လက်ပံတောင်းတောင်လူထုကိုပြောရင် ပြေလည်သွားမယ်”ဟူသော ခပ်တိမ်တိမ် အကြံပေးခဲ့လို့ “ ကိုဇော်ဦး စကားနားထောင်မိတာ မှားပြီ”ဟု ငြီးသံထွက်ခဲ့တာ စဉ်းစားစရာအချက်ပါ။ တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ ခြေတံ လက်တံကိုလည်း လျှော့မတွက်သင့်ကြပါ။
၇။ အကျည်းတန်သည့် လပြည့်ညချေမှုန်းရေး။
ဒီလို အခါသမယမှာ တစထက် တစ်စကြီးထွားလာတဲ့ လက်ပံတောင်းတောင်အရေးဟာ လွှတ်တော် ကနေ စစ်ဆေးမဲ့အဆင့်အထိ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာက လယ်သူမ ကလေးသွဲ့သွဲ့ဝင်းနဲ့ အခြေအတင် စကားစစ်ထိုးရင်း တရုတ်ကိုကြောက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ အသံလည်း ထွက်လာရော လူထုဟာ အနာပေါ်ဒုတ်ကျပြန်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို ညှိနှိုင်းမဟဲ့ ဆိုပြီး ဖုတ်ပူမီးတိုက် ထ လိုက်သွားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခရီးစဉ် လမ်းခုလတ်မှာတင် သပိတ်စခန်းတွေ မီးလောင်တိုက် အသွင်းခံရပြီး ပြာကျကုန်တော့တာပါပဲ။
ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလောင်မီးဟာ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လိုလားသူတွေကို အကြီး အကျယ်မျက်နှာပျက် အကြပ်ရိုက်စေပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ပြလက်စမျက်နှာ ထားစရာမရှိအောင် ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
ထို့အတူ နောက်ကြောင်းပြန်ချင်သူတွေအုပ်စုကလည်း လက်ရှိအခြေအနေမှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် အောင်ပွဲခံဖို့ မရေရာ၊ သူ့လူကိုယ်လူ မကွဲတာကြောင့် မုန်လာဥလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြတော့တာပါပဲ။ အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးအတွင်းမှာ ခေါင်းချင်းရိုက်ကုန်လိုက်ကြတာ သမ္မတရုံးရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ပြန်ပယ်ဖျက်ရတဲ့ အခြေအနေ အထိ ရှုပ်ထွေးကုန်ပါတယ်။
၈။ ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှ ဓားစာခံများ။
အတွင်းပိုင်းမှာ ဘယ်လိုညှိခဲ့ကြသလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရပေမဲ့ ပထမဆုံး ဓားစာခံတွေကတော့ မုံရွာဆေးရုံအုပ်ကြီး၊ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ ဒုတိယရဲမှူးကြီးသူရသွင်ကိုကိုပါပဲ ။ အားလုံး မျက်စိပျက်မျက်နှာပျက်၊ အသံတွေ တုန်တုန်ရီရီနဲ့ ဗြောင်လိမ်ပေးကြရပါတယ်။ ရဲတွေကိုယ်တိုင် သံဃာတော်တွေကို တောင်းပန်မယ် ဆိုတာလည်း သတင်းကြိုထွက်နေပါတယ်။ ဦးသာအေးကို ဖြုတ်သင့်တယ်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဦးကိုကိုမှာ တာဝန် အရှိဆုံးဆိုပြီး တီးတိုးသံတွေလည်း ထွက်လာပြန်ပါတယ်။
သေချာတဲ့အချက်ကတော့ ဆန္ဒပြသူတွေကို နှိမ်နှင်းတဲ့အဆင့်ငါးဆင့်ထဲက နောက်ဆုံးအဆင့် လောင်မီးဗုံးခွင်း တဲ့အဆင့်မှာ လက်သည်တရားခံ ပျောက်နေပါတယ်။ ရဲတွေကိုယ်တိုင် ကိုယ်တိုင်ပစ်တဲ့ လက်နက်ကနေ လောင်မီးတွေ ထွက်လာတာကို အံ့သြနေကြရတယ်ဆိုပါတယ်။ အဆင့်ငါးဟာ ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ၊ လောင်မီးဗုံးတချို့ကို ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီက အစားထိုးပေးခဲ့သလား။ ဝမ်ပေါင်ဘက်တော်သား အောက်ခြေ အရာရှိတွေက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သုံးခဲ့သလား။ စီမံကိန်းမရပ်ရရေးအတွက် ရက်ရက်စက်စက် မှတ်လောက်သား လောက်အောင် ရည်ရွယ်တာကတော့ သေချာလှပါတယ်။
အဆင့်ငါးဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲ။ ဝမ်ပေါင်မှာ ဒီလက်နက်တွေ အဆင်သင့်ရှိနေသလား။ မေးခွန်းတွေ မဆုံးနိုင်ပါ။အထက်အမိန့်ကို လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ပြီး မိမိလိုချင်တဲ့အကွက်ကို ကြားတစ်နေရာရာမှ မသမာ စိတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ရပ် ပြုနိုင်တာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြစေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များ သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေမှာ ဥပမာ အမြောက်အများရှိပါတယ်။ လူထုရဲ့ အသိဥာဏ် ဆင်ခြင်တုံတရားကို တည့်မတ် ထိန်းကျောင်းပြီး သူ့လူကိုယ့်လူ ခွဲခြားနိင်မှ အဖြေမှန်ပေါ်လာကာ အပြစ်ရှိသူကို ထိရောက်စွာ အပြစ်ပေး နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၉။ လမ်းပေါ်ကိုလူထုတက်လာကြရင် ပြဿနာအားလုံးပြေလည်သွားမလား။
ကျနော့်စိတ်ထင် ပြေလည်ရန် အကြောင်းမရှိပါ။ ယုတ်စွအဆုံး အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံး ချက်ချင်းဆင်းပေးရင်တောင် ပြေလည်ဖို့ မရှိပါ။ အဖက်ဖက်က ဆိုးရန်သာ ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးဟာ စီမံချက်ကျကျ အသေးစိတ် အချိန်ယူပြီး စံနစ်တကျ ဘက်ပေါင်းစုံက စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တာကြောင့် အမေရိကန်လေယာဉ်ကြီးတွေ မြန်မာ့ ကောင်းကင်ယံမှာဝဲပြီး ချက်ချင်းရောက်လာမဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုမျိုး မထားသင့်ပါ။ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့် ခုတ်ရာ တလွဲ ရှရာတခြားမီးခိုးကြွက်လျှောက် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားနိုင်တာကို သတိချပ်ကြဖို့ပါ။ဖဲဝိုင်းနဲ့ ဥပမာ ထပ်ပြရရင် သူဆင်ထားတဲ နှပ်ကြောင်းအတိုင်း ချိုးမိလို့ သူ့အိမ်မှာ ကိုးကျသွားမဲ့ အပေါက်ပါ။
အကိုင်အတွယ် မတတ်ရင် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး တရားခံပျောက်ကာ တိုင်းပြည်ရေစုန်မျှောပါလိမ့်မယ်။ ရနေတဲ့ ပွင့်လင်းစ အခြေအနေမှာ ရှိသမျှလွတ်လပ်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြင့် ဥာဏ်ကြီးကြီးထားကာ စစ်ဆေးအဖြေရှာဖို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိနေပါပြီ။
၁၀။ တရားခံအစစ်ကိုရှာရန် ပြည်သူကို ဂျူရီလူကြီးတာဝန်ပေးပါ။
အကယ်၍ ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်တဲ့ ဘယ်အဆင့်က ပုဂ္ဂိုလ်မဆို လွတ်လပ်စွာ မေးမြန်းခွင့်အပ်နှင်းပြီး လက်ပံတောင်းတောင်အရေး အဖြစ်မှန်ကို ဖော်ထုတ်ခွင့်ရှိမည်ဆိုရင် လေးပစ်သူအုပ်စုရဲ့ အနိမ့်ဆုံးတပ်သား ကနေ ခြေရာခံကာ အဓိကလက်သည်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ကောင်း ပါလိမ့်မယ်။ အနိမ့်ဆုံးတပ်သားကို “မင်းကို ဘယ်သူ ဘယ်လိုအမိန့်ပေးသလဲ”၊ “ဒုရဲအုပ်ကို ဘယ်သူက ဘယ်လို အမိန့်ပေးသလဲ” ။ အဆင့်ဆင့် အထက်အောက် အမိန့်နာခံမှုတွေနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက် နှုတ်မိန့် ရုံးအမိန့်တွေ သေချာပေါက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ နေပြည်တော်က ပေးပို့ညွှန်ကြားသည့်အမိန့်၊ ရုံးစာ၊ နှုတ်မိန့်များကို စစ်ဆေးရပါမယ်။ ဒီအမိန့်ကို အောက်ခြေအဖွဲ့တွေက ဘယ်လိုအဆင့်ဆင့် အမိန့်ပေး အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်နိုင်ရင် အဖြေမှန် ရလာနိုင်မှာပါ။ “တဆင့်ဆင့်ကလိမ်နေရင်ကော”ဟု စောဒကတက်လာလျှင် စစ်ဆေးမှုကို တိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင် ထုတ်လွှင့်ပြသပြီး မီဒီယာအကူအညီနဲ့ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို ဂျူရီလူကြီးတွေအဖြစ် နေရာပေး၊ နားထောင်ဆုံးဖြတ်စေဖို့ပါပဲ။ရဲတွေကို ဝန်ခံတောင်းပန်ခိုင်းတဲ့ ကစားကွက် မျိုးတွေကိုလည်း အလွယ်တကူ ရိုက်ချိုးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီက တဆင့်တက်ပြီး သွားလေသူတွေ ထင်ရာစိုင်းသွားတဲ့၊ နိုင်ငံကိုအပေါင်ထား ကိုယ်ကျိုးရှာသွားကြတဲ့ လုပ်ငန်းစာချုပ်အားလုံးကို စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ လုံးပန်းကြရပါမယ်။လက်ရှိအခြေအနေကတော့ ပြည်သူဖက်က ဘောလုံးပွဲလည်းရှုံးတဲ့အပြင် လောင်မီးဒဏ်ရာတွေကိုပါခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ပါပဲ။ ဒီအခြေအနေကနေ အကောင်းဆုံး ရုန်းထွက်ပြီး အနိုင်ဖက်ကို ခြေဦးပြန်လှည့်နိုင်အောင် အားလုံးတတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ပါပဲ။ ကျနော့်ကိုလည်း လိုတဲ့နေရာမှာခိုင်းနိုင်ဖို့ ကျနော် အဆင်သင့်ရှိနေပါ့မယ် ။
ငယ်ငယ်က ဓမ္မဓိဌန် မေးခွန်းဖြေရင် ကိုယ်သိပ်မရတဲ့ အပုဒ်ဆိုရင်
အရင်ဆုံး မဖြစ်နိုင်တာကိုရွေးထုတ်ပြီးမှ ကျန်တဲ့ ထဲကရွေးသလိုပါပဲ
အခု စာရေးသူက မဖြစ်နိုင်တဲ့  အချက်လေးတွေ ဆွဲထုတ်လိုက်တာကို
သဘောကျပါတယ် ။ ပြန်လာခဲ့ ပါဦးမယ် ။
တက်လာမဲ့ ကော့်မန့် လေးတွေစောင့် ရင်းနဲ့ ပေါ့အစ်ကို ဦးကျောက်ရေ ……
စာရေးသူရဲ့ အရေးအသားကော တွေးခေါ်ယူဆပုံကိုပါ ကြိုက်တယ်ဗျို့ 
ကျန်တာတော့ မပြောတတ်တော့ဘူး ။ ကိုယ်လဲ အတိအကျ ဘာမှ မသိတာကိုး
လောလောဆယ် ၊ သံဃာတွေမှာ ဆေးလိုအပ်နေတယ်ဆိုလို့ ၊ လှူနိုင်ဖို့ ပဲ ကြိုးစားနေတော့တယ်
ပြည်တွင်း ဂယက်တွေက မငြိမ်သေးဘူး၊
ပြည်ပ ဒီလှိုင်းလုံးကြီးတွေက လာဖို့ရှိနေတယ်။
ခံလိုက်ကြရတာ မှန်ပေမည့် ဒီကိစ္စကို ခဏ ဘေးထား၊
အထူးသဖြင့် ဒီရွာထဲကလူတွေ တတ်အားသမျှ စဉ်းစား အကြံပြုသင့် ပါတယ် ။
ဆဲရုံနဲ့ မှမပြီးနိုင်တော့ တာ ။ ကျနော်လည်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့် ပြီး
ဆရာသမားတွေဘယ်လိုများ လုပ်မလဲလို့တွေးရင်း ………
ထူးတာလေးတွေတွေ့ ရင်လည်း လက်မနှေးနဲ့ ဦးနော
မူရင်း စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်က အလွန်ကောင်းသူမို့ပါ
ကျနော်လည်း ကိုမင်းဒင်ကို သဘောကျပါတယ် ..။ အဓိက အချက်အလက်ထက် အရေးအသားကို အတွေးအခေါ်ပါအောင် ဖြန့်ပေးသွားလို့ပါ …။
ထပ်ဆင့် ဖော်ပြပေးသော်လည်း မဖတ်ရသေးသမို့
ရှဲရှဲ ပါ အူးကျောက်
We need to find the real culprits behind the curtain.
That ugly affair must not let to be occurred again.
We, all Myanmar, need to be united to overcome the injustice, cruelty and oppression.
(ရေရာတိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခု မတွေ့ခင် ကြွက်ချေးတွေထဲက ဆန်ကို ခါထုတ် မပစ်မိဖို့တော့ သတိကြီးကြရပါလိမ့်မယ်။)
စိတ်ရင်းစေတနာ အမှန်နဲ့ အနှစ်အသားပါတဲ့ စာတွေချည်းမို့ ရေးသူကိုရော၊ တင်ပေးသူကိုပါ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
စတင်ကတည်းက ဖတ်မိပေမယ့် သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်အုံးမယ်ဆိုပြီး ကြာနေလို့ ခုမှ မန့်ဖြစ်တယ်။